Iyini i-cornelian - ukuthi ukupheka, izinzuzo zomzimba nezindlela zokupheka ebusika ngaphandle kobuncipha
Ukudla Kuyinkosikazi yenothi
Dogwood - yini ukupheka kuyo, yiziphi izinzuzo amajikijolo kanye zokupheka for izitsha ezithakazelisayo yonke ukunambitheka!
Nakuba abantu abaningi bezwile nge-dogwood, akubona wonke umuntu owaziyo ukupheka kuwo. Eqinisweni, ulwazi olunjalo namakhono ngeke nje wenze imenyu yakho ihluke kakhulu, kodwa futhi inikeze ithuba lokusebenzisa ngokuphumelelayo ukupheka esinye isipho esiwusizo kakhulu semvelo.
Lowo ongakaze ahlangabezane nesitshalo esinjalo nezithelo zawo, unesithakazelo kulokho i-dogwood ebukeka ngayo, lokho okuthandayo, lapho ungathola khona nokuthi ungazama kanjani isimangaliso semvelo.
I-Cornelium iyi-shrub efinyelela ekuphakameni, ngezinye izikhathi, kuze kube ngamamitha ayisikhombisa.
Isitshalo esasakazeka kakhulu eCrimea, eCaucasus, Moldova, Asia Ephakathi nakwezinye izifunda ezinesimo sezulu esishisayo.
I-thermophilicity ingenxa yezimbali zakuqala: izimbali zokuqala zivela phakathi no-Mashi, futhi ukuhluma kwezihlahla kuhluma ngasekupheleni kuka-Agasti-ekuqaleni kuka-Septhemba.
Izithelo cornelian - amajikijolo bombala obomvu noma we-burgundy, ifomu oblong, omuncu kanye ne-tart kancane ukunambitha.
Ngaphakathi kweberry ngalinye ithambo elikhulu, okuyinto, ngokuya ngenhloso yesithelo, ishiywe noma isusiwe, ngokusekelwe ezincomo ze-recipe.
Yini ewusizo ngama-corpuscles emzimbeni womuntu?
Ukusetshenziswa kwe-dogwood ngomzimba kuyamangalisa futhi kukhuthaza ukusetshenziswa okungenamthetho kwamajikijolo ekuphekeni. Ngisho uhlu olungaphelelwanga ohlwini lwezinto eziyisisekelo zezithelo eziyisimangaliso kubonisa ukubaluleka kwabo okukhethekile.
Ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwe-vitamin C, P ne-beta-carotene, ummbila usiza nge-beriberi, unomphumela we-antiscorbutic.
Ama-Tannins amajikijolo anomphumela we-astringent futhi anikezela ekuqiniseni isitokisi.
Ukusetshenziswa kwe-cornelian kuboniswa kubantu abashukela ngesifo sikashukela, njengoba kunciphisa izinga leshukela egazini futhi kuthuthukisa ukusebenza kwe-pancreas, umsebenzi wayo we-enzymatic futhi unomphumela omuhle kuwo wonke uhlelo lokugaya ukudla.
Izinto eziseziqhingini zinomthelela wesifo se-diuretic and choleretic, ziyasiza ngezifo zesibindi nezinso.
Ngokusebenzisa i-dogwood njalo, kuyokwazi ukunciphisa ukucindezela kokugubha ne-cranial, ukuthuthukisa ukusebenza kobuchopho nokuqinisa isimiso sezinzwa.
Izakhiwo ezimangalisayo ze-cornelian zisetshenziselwa izifo zamalungu, igciwane noma ukuqinisa umzimba futhi zandise izindawo zayo zokuvikela ngokujwayelekile.
Ungalondoloza kanjani i-cornelian?
Kuye ngokuthi yini eyenziwe ku-dogwood, ukuthi isetshenziselwa kanjani ukudla noma igcinwe ebusika iyoxhomeka endleleni umkhiqizo ugcinwa ngayo.
Amajikijolo amasha angagcinwa esitsheni esisibophekile noma ephakheji enezimbobo, esibeka esiqandisini, endaweni yemifino nezithelo. Igama lesitoreji esinjalo akusikho izinsuku ezingu-12.
Izithelo zingamiswa emoyeni, zigweme ilanga eliqondile emajikijolo, noma kuhhavini elivulekile, ligcine izinga lokushisa lama-50-60 degrees.
Indlela ekahle yokugcina umkhiqizo owusizo ukukhipha amajikijolo emaphakheji angagcinwa kuze kufike isivuno esilandelayo.
Ukulungiswa kwe-preform okuqanjwe ngendwangu nokwakheka ngokweqile kusuka ku-dogwood kugcinwa kahle ngisho nangaphansi kwezimo zegumbi zonyaka noma ngaphezulu.
Cornel - zokupheka zokupheka
Uma uqoqe noma uthenge i-cornelian, yini okufanele uyipheke kuyo, ungathola okunye. Ukupheka okulula kuzokusiza ukuba umndeni ube nezitsha eziwusizo, futhi ukwazi izimfihlo ezithile zokukhishwa kwetheknoloji kuzokwenza ukunambitheka kwabo kuphelele futhi kube lula ngenqubo.
Izitsha ezingavamile ezivela e-cornelian zivame ukudinga ukulungiswa kwangaphambili komkhiqizo wokuqala. Uma usebenzisa amajikijolo ekugcwaliseni i-pie noma njengengxenye ye-sauce, inyama emathanjeni ihlukaniswa kuqala. Ukwenza lokhu, izithelo ezivuthiwe zichotshozwa ngemfoloko noma ngaphansi kwesilazi futhi amathambo akhethwe ngezandla zabo noma avumela ukukhululeka kwamaberry ngamanzi amancane aze athambeke bese egaxa nge-sieve.
Ukulungiselela ama-compotes, i-kissels noma itiye, amajikijolo angasetshenziswa esimweni sabo sokuqala ngokuphelele noma ngomphumela ongcono, sebenze kancane bese uthola inyama ehlanzekile, ususe amathambo.
Ukubhaka nge-cornelian akujabulisi nje kuphela ngesilinganiso sayo somsoco nokubunjwa okubalulekile. Ukunambitheka okumangalisayo kokudla okutholakalayo kuzomangaza ngokuqala nokulungiswa. Ngokuvamile amajikijolo ekugcwalisweni afakwa izithelo, kulokhu - lezi zi-apula, ezigcizelela ngokuhambisana nokukhanya okulula kwezithelo eziwusizo.
ufulawa - 3-4 izibuko;
i-margarine - 200 g;
ushukela - 1 indebe;
ukhilimu omuncu - izibuko eziyi-1.5;
ukupheka powder - 1 ithisipuni;
ushukela oluyimpuphu - indebe ye-2/3;
ama-apula - izingcezu ezine;
cornel ehlutshiwe - 1 ingilazi;
Beat amaqanda ngoshukela.
Gxila ku-margarine esithambile, ukhilimu omuncu.
Engeza ufulawa ne-powder baking in izingxenye uphinde uhlanganise inhlama ethambile kodwa engenayo.
Hlulela inhlama efomini elinamafutha ngezinhlangothi eziphakeme, ufafaze phansi ngezithelo zomuncu ochotshoziwe.
Phezulu, nquma ama-apula kanye ne-cornelian.
Bhaka amaminithi angu-40 ku-180 degrees.
Beat up ukhilimu omuncu nge powder, uthele ukhilimu ikhekhe.
Ngemuva kokupholisa okuphelele kanye nokungeniswa, i-pie iphethwe etafuleni.
Itiyi le-Cornflower iyinhlahlandlela engenziwa kusuka amajikijolo avuthiwe. Isiphuzo esiphuthumayo sizoba amandla okuhlinzeka umzimba emakhazeni noma emva kokugula, kuzoba nomthelela omuhle futhi kukhulise amandla. Ushukela kulokhu kungathathwa indawo noju noma ujamu, okuzokwenza isiphuzo sibe usizo nakakhulu.
cornelian - 1 ingilazi;
amanzi ahlanzekile - 1 l;
itiye elimnyama - amathisipuni amane;
ilamula - ucezu olulodwa;
Amajikijolo aqeda izimbobo.
I-pulp ichotshoziwe, ijusi elifakiwe.
Squeezes ubilise ngokufaka ushukela, isihlungi.
I-tea ye-brew ngokwehlukana, exutshwe ne-decoction nejusi futhi yakhonzwa.
Enye indlela yokusebenzisa ukupheka umzala wakhe - zokupheka kuzo zonke izinhlobo zamasiksi ezizosiza ukuthuthukisa nokugcizelela ukunambitheka kwanoma yisiphi isidlo esingasetshenzisiwe. Enye yezinketho zokwenza ukwengeza okumnandi kwenyama ethosiwe izohanjiswa kamuva. Isimo esingenakuphikwa sokuthola umphumela omuhle kakhulu amajikijolo avuthiwe.
cornelian - 500 g;
pepper eshisayo - ucezu olu-1;
imifino - 1 bunch;
i-hops-suneli - ithisipuni 1;
usawoti, ushukela, iviniga - ukunambitha.
Amanzi ase-cornelian aphikisayo athululelwa emanzini futhi ahlanganiswe ngokubilisa imizuzu engu-15.
Amajikijolo ahlanzekile aqeda imigodi.
I-pulp elandelwayo ihlangene emkhunjini we-blender nemifino, ibhotela, u-garlic kanye ne-pepper eshisayo futhi yahlatshwa ngezinga elifunayo lokugaya izigungu.
Ubuningi bubekwe epanini, uma kunesidingo, kufakwe emphakathini oyifunayo, wengeze i-decoction ye-cornel, enomusa wokunambitha.
I-Sauce evela ku-dogwood ukuze idle ifudumele ukuze ibilise futhi ipakishe izimbiza eziyinyumba.
Kissel kusuka ku-dogwood
Njenganoma yiziphi ezinye iziphuzo ezivela ku-dogwood kissel kuvela ngokumangalisayo okumnandi futhi kucebile ngokungavamile. Ukubaluleka okukhulu nakho kuyimfanelo yokudla okunomsoco we-dessert efanayo, engaqedela isidlo sasemini esiphuthumayo noma ayisebenzise njengesengezo esiteshini esikhulu sokudla okusemini noma isidlo sakusihlwa.
isitashi - 3-4 st. izinkezo;
ushukela - 150 g.
I-cousine ibilisiwe emanzini imizuzu engu-10.
Gubha ubukhulu berry ngokusebenzisa isihlungo.
I-Puree ixubene nomhluzi futhi iphinde ifakwe emathuneni, idonsa isisekelo senqubo yokunambitha.
Hlanganisa isitashi emanzini, uthele i-pine encane ibe epanini ne-decoction yomzala.
Emva kokubilisa okwesikhashana, vumela i-jelly ipholile, bese-ke, uma ngabe ufisa, faka isihlungi nge-gauze.
Yini ongayipheka ku-dogwood ebusika?
Uma kukhona ithuba lokulondoloza i-dogwood esikhathini esizayo, yini okufanele uyipheke kuyo ebusika, uzofunda kabanzi. Ukupheka okuqinisekisiwe kuzosiza ukugcwalisa amasheya enqwaba yamalungiselelo ayigugu, kuhlanganise nokudla okudakayo kanye nokudla okulula, kanye nazo zonke izinhlobo zeziphuzo.
Indlela elula yokulungisa i-dogwood ebusika ukupheka kuyo isiphuzo futhi ngaphandle kokungabaza i-compote ewusizo. Ukuhlushwa nokugcwala kwesiphuzo kuyoxhomeka ekulinganiseni kwamalungu futhi kungenziwa kukhethwe ukunambitha.
I-sweet delicacy ebaluleke kakhulu ekuqiniseni ukuzivikela komzimba noma ngokumane ugcwalise imenyu ye-dessert izoba ujamu noma i-jam lamajikijolo . Ngaphezu kwalokho, izitshalo zommbila ngaphandle kwemigodi zinganqotshwa nge-grinder yenyama futhi zihlanganiswe noshukela ku-1: 2 isilinganiso. Gcina lolu hlobo lobumnandi emakhazeni.
Abalandeli bezingcezu zokuqala bayakwazisa ukunambitheka kwezinhlanzi eziqoshiwe, futhi abathandi bezophuzo ezenziwe ekhaya bazojabulela ukugcwalisa amajikijolo okuhlwabusayo.
Uma kukhona isikhala samahhala efrijini, i-cornelian ingaba iqhwa futhi isetshenziswe njengoba kudingeka.
Phakamisa kusuka ku-dogwood ebusika ngaphandle kokufaka inzalo
I- cornel evunwayo evunwayo ebusika iyoba yindawo efanelekile yokuphuza isiphuzo. Iresiphi eyisisekelo esilandelayo yesiphuzo ingasetshenziswa njengesisekelo sokuhlola, okwengeza ekubunjweni kwamanye amajikijolo noma izithelo futhi ngaleyo ndlela uthole ukunambitheka okucwengisisiwe nokuqala kokuphuza.
cornelian - 2 izinkomishi;
amanzi ahlanzekile - amalitha amathathu;
ushukela - 1 ingilazi.
I-Dogwood igubungulwe ngamathini amancane futhi ithululelwe phezu kwamanzi abilayo imizuzu engama-30.
Amanzi akhanywa, abilisiwe, noshukela adluliselwa embizeni.
Thela okuqukethwe kweziqukathi ngokumnika okubilisayo, uphawu, vula izitsha zibe phansi, zifudumeze zipholile.
Gem kusuka e-pitted cornelian - iresiphi
Okuthakazelisayo ukunambitha, ngokumunuka okungahambi kahle nokukhanya okukhanyayo, i- sinamoni jam kuyojabulisa abantu ababili abadala nabantwana abakuthandayo. Kulesi simo, kufanele uhlolisise ukukhishwa kwezingulube, kodwa umphumela uzolungisa wonke umsebenzi. Ukuvuna, izithelo ezivuthiwe nezivuthiwe kuphela ezifanelekile.
dogwood - 1 kg;
amanzi ahlanzekile - 300ml;
ushukela - 700 g.
Amajikijolo afakwa emanzini bese epheka imizuzu engu-15.
Gubha izithelo ezithambile nge-sieve enkulu, ohlukanisa amathambo.
Engeza amazambane ahlambulukile ahlanganiswe nomhluzi, ushukela, upheke jamu, uvuselele, imizuzu engu-30, ufakwe izimbiza eziyinyumba.
Okumangalisa okoqobo ukunambitheka kwangempela kwasekuqaleni kunolwandle olunama-cornelian njengeminqumo. Ukudla okunjalo okunomsoco kuyoba ukwengeza okumangalisayo kunoma iyiphi idili kanye nomhlobiso omuhle weladi nezinye izitsha. Gcina ubuqotho bezithelo ngesikhathi sokwelashwa kokushisa kuzosiza ngaphambi kokubashaya nge-toothpick noma i-skewer.
uviniga - 100 ml;
usawoti - 1 tbsp. isipuni;
ushukela - amathisipuni amahlanu;
i-clove, i-laurel, i-pepper elimnandi ne-tarragon - ukunambitha.
Lungisa ama-marinade, amanzi abilayo noshukela, usawoti kanye noviniga, faka i-dogwood elungiselelwe.
Amajikijolo anesithombeni emlilweni othulile imizuzu engu-15.
Ngaphansi kweziqukathi ezinyathelayo zibeka izinongo, gcwalisa amathini ngamabhisikijolo abilisiwe nge-marinade.
Izitsha zivaliwe, zihlanganiswe kuze kube sekhohliwe.
Abathandi be-alcohol eyenziwe ekhaya bayothanda i-liqueur eyenziwe yi-dogwood. Ukuphuza kungatholakala ngokusebenzisa ubuchwepheshe obufana nokulungiswa kwewayini, noma ukusebenzisa izincomo ezivela kule recipe bese wenza lula umsebenzi. Amajikijolo aqhekekile aqhutshelwa esisekelo sokunxila, emva kwalokho isiphuzo siphunga ukunambitha.
i-vodka - 500ml;
ushukela - 500 g.
Yelulela amajikijolo nge-tolik, uthele i-vodka, uvale ngokuqinile ngesimbozo bese ushiya inyanga.
Iqedile i-tincture ye-cornel ihlungiwe, ifanisiwe futhi ikhulile ngesonto ukuze ijwayele ukunambitha.
Indlela yokukhipha i-cornelian?
Ikakhulukazi kulula ukukhipha i-dogwood ebusika. Inqubo yokuvunwa okunjalo kwamajikijolo ayidingi noma yimuphi umsebenzi futhi ayinandaba neze. Kodwa ngenxa yalokho, kungakapheli unyaka kuzotholakala ngezikhathi ezithile ukuthola ingxenye efanele yezithelo bese uyisebenzisela ukwenza zonke iziphuzo, izidakamizwa, ubhakabhaka, amasoso nezinye izitsha.
Khetha izithelo ezivuthiwe nekhwalithi, ukuqeda ama-specimens asusiwe futhi achotshoziwe.
Geza inqwaba yamaberry ethawula ithawula noma izicubu ezomile.
Ungakwazi ukuqeda amajikijolo ngokuphelele, ukuwafaka ezikhwameni noma eziqukathi ezikhethekile.
Ukuze wenze ukugcwalisa okuphekiwe okwenziwe ngomumo noma ingxenye yokwenza ezinye izitsha, ungafisa i-dogwood, ususe ama-pre-amathambo.
Indlela yokwasawoti ama-freckles?
Isidlo sezinkondlo ngenyama enobisi
Indlela yokugcina uju ku-honeycombs?
Indlela yokwenza i-batter ye-zucchini?
Vula - ukupheka zokupheka
Indlela yokudoba ingulube?
Utamatisi unamathisele ekhaya - iresiphi
Indlela yokupheka amaqanda kanye nama-utamatisi?
I-Easter wreath - iresiphi
Ungagcina kanjani ama-lingonberries ebusika?
Marinade for herring okuzenzela
Ingulube izinso - iresiphi
Inhlama yakho ye pizza ngaphandle kwemvubelo
Amaphephadonga amnyama - isisombululo esingavamile sokuhlobisa izindonga
Indwangu ye-cashmere - izithombe ezingu-40 ezenziwe ngesitayela kwengubo ye-cashmere
Jamu kusuka kuma-watermelon crusts ku-multivark
Ungaqala kanjani ukuzithuthukisa nokuzithuthukisa?
Umama womgqobo womlobokazi 2014
Usuku lokuzalwa ngesitayela samantoni
Yini okufanele ugqoke izigqoko zama-ankle ze-burgundy?
Ukumiswa ku-amniotic fluid
Ukuhlukaniswa nguLenorman ngekusasa
Isihloko esihle: ULeonardo DiCaprio usekela iphrojekthi yefilimu iQuentin Tarantino
I-Square Hall Square (i-Tartu)
Ingubo eboshiwe ngengubo
I-Maxi skirt 2016
Indlela yokuthola i-hypnosis?
I-folic acid yabesifazane abakhulelwe
Iklabishi elibabayo ebusika
I-Lady Gaga ku-Grammy 2016
Frying pan for gas isitofu
Ukukhushulwa kwezinkukhu kubantwana